▷ 🎮 CARS 3 Project 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 CARS 3 Project 【Ntụle na budata ✅】
Ụgbọ ala oru ngo 3 na mgbanwe ya gaa n'ọsọ egwuregwu ndị ọzọ nwere ike na-atọ ụtọ mgbe ụfọdụ, mana mgbe ụfọdụ ọ na-esiri gị ike itinye ya ọnụ.
Ụgbọ ala oru ngo 3 na-agbasawanye nkọwa nke nsonazụ. Ọ dịghị ihe dị ka egwuregwu ụgbọ ala ndị gara aga, na-akụda asọmpi ọdịnala nke franchise maka usoro ịnweta ohere nke ọtụtụ ndị egwuregwu nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ihe si na ya pụta bụ egwuregwu ịgba ọsọ na-adọta oke na mpaghara ndị egwuregwu Forza kwesịrị ịma nke ọma, nke pụtara na ị nwere ike ịnụ ụtọ agbụrụ gị na-enweghị nghọta miri emi banyere ọrụ dị n'ime ụgbọ ala ọ bụla ị na-anya. Mana ọ bụkwa egwuregwu ịgba ọsọ na-agbasi mbọ ike iweta ihe ọhụrụ ya niile n'otu ụzọ.
Obi nke Project Cars 3's mgbanwe bụ usoro ihe eji eme ihe emejuru. Ị ga-enwe ike karịa nke ọma n'ihu iji gbadaa oge ọ bụla na ezigbo ego ụgbọ ala, naanị ị ga-achọ ịkwado obere oge iji mee ka azụ ghara ịpụ n'okpuru gị. Nke a na-eme ka agbụrụ ahụ dịkwuo ngwa ngwa ma na-emewanye ihe, ọ na-atọkwa ụtọ mgbe ị na-eme otu ntụgharị zuru oke na nke ọzọ.
Ngwungwu nkwado na-enye gị ohere ịhazi ahụmịhe ahụ na mkpa gị n'ụzọ dị egwu. Enwere ihe isi ike ọkọlọtọ ịhọrọ na, mana nhọrọ ọ bụla, gụnyere ihe enyemaka kwụsie ike, njikwa traction, na breeki ABS, nwere ike gbanwee n'onwe ya iji nye oke ịma aka. Inwe ọtụtụ nhọrọ iji megharia ụgbọ ala Project 3 na playstyle masịrị gị bụ mgbakwunye nnabata na usoro a, na-emepe ya maka ọtụtụ ndị egwuregwu karịa mgbe ọ bụla. A na-enwe ihe ngosi mgbe niile nke ịme anwansị nke na-echetara gị ka ị na-aṅa ntị mgbe niile ka ị na-abịaru nso n'oge ntụgharị ọ bụla, nke na-enyere aka site na akara nrịbama n'ahịrị agbụrụ nke na-egosi mpaghara breeki ọ bụla na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọ bụla. Inwe akara n'ọnọdụ ahịrị ịgba ọsọ siri ike na-edobe ụfọdụ obi ụtọ na-emebibeghị mgbe ị na-eme egwuregwu, na-ama gị aka ịmara onwe gị na ahịrị na oke ya kacha mma. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ime ka egwu dị mma ka ị nwetachara ntụgharị ọ bụla, n'agbanyeghị na ụgbọ ala Project 3 na-akwụghachi ụfọdụ mpaghara mgbagha mgbe ọ na-ekwesịghị.
Enwere ike ịhazigharị ihe isi ike AI na-adabereghị na enyemaka gị, nke bara uru ma ọ bụrụ na-amasị gị ịgba ọsọ na-enweghị nchekasị nke breeki ma ọ bụ mgbanwe gia. N'ụzọ dị mwute, ọbụlagodi na ntọala ya kachasị elu, AI adịghị emezu ihe ịma aka ndị na-akpali akpali n'oge ihe omume etiti ruo ogologo oge. Mgba ọsọ nke mba dị iche iche na-apụta ìhè nke ọma, ụdị mmegide ọ bụla na-ekupụ tupu ya erute n'etiti okporo ụzọ.
Omume ọ bụla na egwu a na-enye gị XP, site na ịfefe na mberede gaa n'ịnọ ọdụ n'azụ onye mmegide. HUD nwere ike nweta ntakịrị ihe na ozi niile ọ na-achọ ibuga ka ị na-elekwasị anya n'ụzọ dị n'ihu, na-enwu site na ụgwọ ọrụ ọhụrụ ọ bụla ị nwetara. Ọ na-enye aka ịnwe ụzọ mkpirisi na D-pad iji gbanyụọ ihe niile kpamkpam n'oge niile, mana ụfọdụ okwu a na-ahụ anya na-eme ka mkpuchi ahụ dum na-egbuke egbuke n'oge a na-agba ọsọ, nke nwere ike na-ewe iwe karị. Onye injinia ịgba ọsọ ị nwere ike ịhọrọ ịnwe na ntị gị n'oge asọmpi na-agakwa nke ọma, ọ na-adịkarịghị ebugharị ozi dị mkpa nke na-enyere gị aka n'apata ọ bụla, na-ekwupụta mmeri gị site n'ọsọ efu.
Ị naghị aga n'ihu na mkpọsa ụgbọ ala 3 Project site na imeri agbụrụ, mana site na ịmecha ihe ịma aka atọ niile na nke ọ bụla n'ime ihe omume ha. Ihe ịma aka ndị a na-adịkarị mfe imecha na-enweghị nnukwu mbọ, ma nke ahụ na-eme usoro ntu zuru oke ma ọ bụ na-emecha n'apata kacha ọsọ. Ndị ọzọ na-eche na ọ bụ ihe na-adịghị mma banyere ime ihe na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ụfọdụ siri ike chọrọ ka ị nọrọ n'azụ ndị mmegide gị ka ị were ha n'ọrụ ruo oge ụfọdụ tupu ịgafe nke ọma, ebe ndị ọzọ na-achọ agbụ ntụgharị zuru oke na ọnọdụ na egwu na-ata naanị otu ntụgharị na-ezighị ezi. Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na ị na-achọ naanị ka mkpọsa ahụ na-aga n'ihu, enwere ohere zuru oke iji mezue ihe ịma aka na-alaghachighị na ndị na-amasịghị gị. Mana iji mmeri n'ọsọ dị ka ihe mgbaru ọsọ kachasị na-ebelata echiche nke mmeri kwesịrị ịbịa site n'ịgafe ahịrị tupu onye ọ bụla ọzọ.
A na-anakọta ihe omume mkpọsa n'ime usoro 10, nke ọ bụla n'ime ha chọrọ ụgbọ ala nke nkọwapụta maka asọmpi. Ị na-amalite na ala, na ụgbọ ala okporo ụzọ omenala na oge ochie, na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu na igwe ịgba ọsọ mara mma nke e mere site n'elu ruo na ala maka otu ụbọchị na egwu ahụ. Ịzụ ụgbọ ala ndị ị chọrọ maka usoro nke ọ bụla abụghị nnukwu ihe mgbochi nyere nnukwu kredit enyere maka mmemme ọ bụla ị na-aga, mana ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ịbanye n'azụ ụgbọ ala ọhụrụ iji mụta ins na outs. ama ama clues. Ọganihu na-agbanwe agbanwe anaghị eme ka ị rapagidesi ike na ogologo ogologo ogologo oge ma ọ bụ chọọ ka ịmechaa ebumnobi ya iji gaba na klaasị na-esote. O yikwara ka ọ na-adaba n'ọ̀tụ̀tụ̀ ọganihu nke onwe ya, na-eme ka nzọụkwụ nke ọ bụla ruo ọkwa ọhụrụ nwee mmetụta nke enwetara ego na ihe siri ike iji mee ya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na otu n'ime ụgbọ ala dị na ụlọ ngosi gị, Project Cars 3 na-enyekwa gị ike ịhazi ọrụ ya iji mee ka ọ ruo eruo maka ọkwa ebe ọ na-ekwesịghị ịbụ. Ị nwere ike ịnwe otu ụgbọ ala E-Class dị ala nke ị na-amalite site na ijikọta onwe gị na ụfọdụ supercars kachasị ike na egwuregwu ahụ, nke na-egosi n'ezie otú usoro a si dị iche na mgbọrọgwụ ya na simulator. Nke a na-ewepụ mkpa ọ dị mgbe niile ịgbanwe ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrapara na ihe ị hụrụ n'anya. Nhazi nkeonwe gbatịkwara na ịchọ mma, na-enye gị ohere ịhọrọ n'ọtụtụ decals, akwụkwọ mmado na-akwado, na ọbụna ụdị taya iji hazie wheelset ọkacha mmasị gị. Ọ bụghị ihe siri ike ma ọ bụ rụrụ arụ ka m ga-achọ, mana o zuru ezu ime ka ụlọ ngosi gị pụta ìhè na igwe mmadụ.
Otú ọ dị, nhazigharị pụtara imekọrịta ihe na menus ndị gbagọrọ agbagọ nke Project Cars 3, nke bụ nanị otu akụkụ nke ihe ngosi dị egwu n'ime na n'ọsọ. Mgbe ịgba ọsọ gasịrị, a na-eweghachi gị na menu ihe omume maka otu ihe omume ahụ, na-eme ka ọ dị mfe ịmalite otu agbụrụ na mberede wee banye na ihuenyo abụọ na-ebu ibu nke na-eso ntinye na ọpụpụ. Mgbe ị na-etinye nhọrọ nhazi maka ụgbọ ala, akpụkpọ anụ omenala m ga-apụta mgbe ụfọdụ a kwadebere mana ọ bụghị n'ọsọ. Oge ndị ọzọ textures ụgbọ ala m na-amagharị n'ụfọdụ ọnọdụ ihu igwe, na reboots emezighịkwa nsogbu ahụ.
Ụgbọ ala Project 3 na-agbanye nkọwa nke ụgbọ ala ya ọ bụla mgbe ọ na-emebibeghị, mana obere ndakpọ ihe na-eyi ihe na-abụghị eziokwu na ọ naghị adị ọtụtụ oge. Ihu igwe na-agbanwe agbanwe n'oge asọmpi nwekwara ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị mgbe egwu na-asa ahụ na igwe ojii na oke mmiri ozuzo. Ma ihu igwe doro anya na-emepụta ọkụ dị larịị nke na-eme ka enweghi nkọwa zuru ezu na nhazi nke mkpọda, na-emebi ụfọdụ n'ime ịma mma nke ihe ngosi akara ngosi.
Ụgbọ ala Project 3 nwere ike ọ gaghị abụ usoro ị tụrụ anya na usoro a, mana ngbanwe ya na ụdị ịgba ọsọ egwuregwu bụ ihe na-eme ka usoro ahụ nweta nke mbụ. Ọ bụghị ebe dị ọcha site na mgbọrọgwụ ya, yana Project Cars 3 na-ejigide nhọrọ ịme anwansị ya zuru oke iji nye ihe ịma aka zuru oke na gbanyụọ enyemaka ya niile. Mgbanwe ahụ ezughị oke, yana ebumnuche ọrụ na-agbagwoju anya yana ntụpọ AI na-akwado ụfọdụ mmemme. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ọzọ ị ga-esi kụọ egwu egwu, Project Cars 3 bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ.
Budata ụgbọ ala Project 3
Amazon Prime Video (Video na-achọ); Richard Dillane, Peter Brooke, Matt Kane (Ndị na-eme ihe nkiri); Sid Bennett (Onye nduzi) - Sid Bennett (Onye ode akwụkwọ) - Nick Hill (onye mmepụta)